Roll-on သုံးတတ်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အရေပြား ကျန်းမာရေးအကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
Roll-on သုံးတတ်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အရေပြား ကျန်းမာရေးအကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
September 23, 20190488
မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ရေချိုး၊ ဖီးလိမ်း ပြင်ဆင်ကြရတာက လူတိုင်းရဲ့ နိစ္စဓူဝ အလုပ်တစ်ခုပါ။ ဒီနေရာမှာ သတိမထားမိလိုက်ပဲ မှားနေတာလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အသားအရေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့ အဆိုအရ လူတွေမနက်တိုင်း ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ တစ်ချို့ အသားအရေဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းမှုတွေက မှားနေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မနက်ခင်းရဲ့ အစောပိုင်းမှာ ရေမွှေးတို့ roll-on တို့ သုံးတာထက် ညအိပ်ခါနီးမှာ အသုံးပြုတာက ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အရေပြားရောဂါ အထူးကု Sandra Lee က ညဘက် ရေမွှေး၊ roll-on တို့ကို သုံးထားမယ်ဆိုရင် အနံ့ မကြိုက်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက် ပိုတောင် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Sandra ကို Dr Pimple Popper လို့ လူသိများပါတယ်။ Sandra က ကိုယ်ပိုင် TV show တစ်ခုကနေ သူမရဲ့ Night Routine တွေကို တင်ပြပြီး နာမည်ကြီးလာသူ တစ်ယောက်ပါ။ Sandra ကို Dr Pimple Popper လို့ လူသိများပါတယ်။ Sandra က ကိုယ်ပိုင် TV show တစ်ခုကနေ သူမရဲ့ Night Routine တွေကို တင်ပြပြီး နာမည်ကြီးလာသူ တစ်ယောက်ပါ။
ညဘက်မှာ Roll-on သုံးတာဘာလို့ ပိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလဲဆိုတော့ လူ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ ချွေးဂလင်းတွေက ငြိမ်သက်နေတတ်တဲ့ ကာလဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါလို့ Sandra ကဆိုပါတယ်။ Sandra က TV show မှာ ငယ်ငယ်တည်းက အသားရေကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ မိတဲ့အတွက် နောင်တရမိကြောင်းနဲ့ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နဲ့ ပွတ်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့မိရင် ကောင်းမှာလို့ သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဝေမျှခဲ့ပါသေးတယ်။
မျက်နှာသစ်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မျက်နှာက အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှား ပစ်လိုက်တာပါ။ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ နေပူထဲသွားတာတို့ အရမ်းအေးတဲ့ အခန်းမှာနေတာတို့ မလုပ်သင့်ကြောင်း Sandra က အကြံပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ မျက်နှာသစ်တဲ့ အခါမှာလည်း လက်နဲ့ ပွတ်တိုက်တာမျိုး မလုပ်ပဲ ရေနဲ့ ဆေးတယ်ဆိုရုံလောက် ညင်ညင်သာသာ ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာ သစ်ပြီးတော့ အစိုဓာတ် ခမ်းခြောက်ရတာက မျက်နှာကို လေထိတဲ့အခါ လေက မျက်နှာပေါ်က အစိုဓာတ်ကို ဆွဲယူသွားတတ်လို့ပါ ဆိုပြီး Sandra က အသားအရေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်တွေကို သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
Photo : Bustle
မနကမြိုးလငြးတာနဲ့ ရခွေိုး၊ ဖီးလိမြး ပှငဆြငကြှရတာက လူတိုငြးရဲ့ နိဈစဓူဝ အလုပတြစခြုပါ။ ဒီနရောမှာ သတိမထားမိလိုကပြဲ မှားနတောလေးတှလညြေး ရှိပါတယြ။ အသားအရေ နဲ့ပတသြကပြှီး ကွှမြးကငွတြဲ့သူတှရေဲ့ အဆိုအရ လူတှမနေကတြိုငြး ပုံမှနလြုပနြတေဲ့ တစခြွို့ အသားအရဆေိုငရြာ ထိနြးသိမြးမှုတှကေ မှားနတယေလြို့ ပှောခဲ့ပါတယြ။ မနကခြငြးရဲ့ အစောပိုငြးမှာ ရမှေေးတို့ roll-on တို့ သုံးတာထကြ ညအိပခြါနီးမှာ အသုံးပှုတာက ပိုပှီးအကွိုးသကရြောကမြှု ရှိတယလြို့ ဆိုထားပါတယြ။
အရပှေားရောဂါ အထူးကု Sandra Lee က ညဘကြ ရမှေေး၊ roll-on တို့ကို သုံးထားမယဆြိုရငြ အနံ့ မကှိုကတြတတြဲ့ သူတှအတှေကြ ပိုတောငြ အဆငပြှလေိမြ့မယလြို့ ဆိုပါတယြ။ Sandra ကို Dr Pimple Popper လို့ လူသိမွားပါတယြ။ Sandra က ကိုယပြိုငြ TV show တစခြုကနေ သူမရဲ့ Night Routine တှကေို တငပြှပှီး နာမညကြှီးလာသူ တစယြောကပြါ။ Sandra ကို Dr Pimple Popper လို့ လူသိမွားပါတယြ။ Sandra က ကိုယပြိုငြ TV show တစခြုကနေ သူမရဲ့ Night Routine တှကေို တငပြှပှီး နာမညကြှီးလာသူ တစယြောကပြါ။
ညဘကမြှာ Roll-on သုံးတာဘာလို့ ပိုပှီး အကွိုးသကရြောကမြှု ရှိလဲဆိုတော့ လူ့ခနျဓာမှာရှိတဲ့ ခွှေးဂလငြးတှကေ ငှိမသြကနြတတေတြဲ့ ကာလဖှစတြဲ့ အတှကကြှောငြ့ပါလို့ Sandra ကဆိုပါတယြ။ Sandra က TV show မှာ ငယငြယတြညြးက အသားရကေို ဂရုမစိုကခြဲ့ မိတဲ့အတှကြ နောငတြရမိကှောငြးနဲ့ မကွလြုံးတစဝြိုကကြိုလကနြဲ့ ပှတတြာမွိုး မလုပခြဲ့မိရငြ ကောငြးမှာလို့ သူမရဲ့ အတှအေ့ကှုံကို ဝမွှခေဲ့ပါသေးတယြ။
မကွနြှာသစတြယဆြိုတာ တကယတြော့ မကွနြှာက အစိုဓာတကြို ဖယရြှား ပစလြိုကတြာပါ။ မကွနြှာသစပြှီးတာနဲ့ နပေူထဲသှားတာတို့ အရမြးအေးတဲ့ အခနြးမှာနတောတို့ မလုပသြငြ့ကှောငြး Sandra က အကှံပှုခဲ့ပါသေးတယြ။ မကွနြှာသစတြဲ့ အခါမှာလညြး လကနြဲ့ ပှတတြိုကတြာမွိုး မလုပပြဲ ရနေဲ့ ဆေးတယဆြိုရုံလောကြ ညငညြငသြာသာ ပှုလုပရြမှာဖှစပြါတယြ။ မကွနြှာ သစပြှီးတော့ အစိုဓာတြ ခမြးခှောကရြတာက မကွနြှာကို လထေိတဲ့အခါ လကေ မကွနြှာပေါကြ အစိုဓာတကြို ဆှဲယူသှားတတလြို့ပါ ဆိုပှီး Sandra က အသားအရနေဲ့ ပတသြကတြဲ့ ကနြွးမာရေးဆိုငရြာ အခကွတြှကေို သူမရဲ့ ပရိသတတြှကေို ဝမွှခေဲ့ပါတယြ။
ပန်းရောင်ပွဲတက်ဝတ်စုံလေးနဲ့ တော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးလို လှနေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ပုံရိပ်….
Samsung ပွဲကို အတွဲညီညီတက်ရောက်လာတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ အေးသောင်းပုံရိပ်….